ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကောက်စိုက်မ နဲ့ ပြိုင်ဘီး”
နေရင်းထိုင်ရင်း အဲသလိုတွေ ဖြစ်တတ်တယ်
ရိုးရိုးတွေးရမှာလား။ဆန်းဆန်းတွေးရမှာလား။။။ ဘယ်လိုတွေးရမှာလဲ။ မတွေးခင် အရင်မေးကြည့်တယ်။
ဟိူင်း ဟိူင်း ကိုဇနိ..လွမ်းနေတယ် မမ..။
ဆက်လက်ဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်။ သုတ်သုတ်ကလေး။ ခင်မင်စွာဖြင့်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မထိတထိ ပြောတာလောက်တော့ ရီတာပေါ့။ ၈ တန်း ၉ တန်း ကျောင်းသားဘ၀ ကျောင်းပြန်လာရင် လမ်းမှာ တခြားရွာက ကောက်စိုက်မ တွေနဲ့ တွေ့ရင် ၀ိုင်းနမ်းကြတာ။ ငိုရခက် ရှက်ရခက်နဲ့ ၊ငိုမှ ပြန်လွှတ်ပေးတာ။ :P
တော်သေးတာပေါ့၊ ကိုပေါ သာ အဲ့ဒီနေရာမှာ က္ဈမ်းထိုးမှောက်ခုန် လဲခဲ့ရင် ဘာများလုပ်ကြမလဲ မသိဘူး..။ မျက်စိစပါးမွေး ဆူးစရာက စက်ဘီးလား၊ ကိုပေါလား..။ အလကားနေရင်း အော့နှလုံးနာတတ်တဲ့ အကျင့်က မွေးရာပါလား၊ မိမိကြီးပြင်းရာ လူ့ဝန်းကျင်က သင်ပေးလိုက်တဲ့ အသားကျပြီးသား ဉာဉ်ဆိုးကြီးလား...။ ဒါပေမဲ့ တချို့က အဲ့ဒီလို ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်း ပြောတတ်တာကို ရိုးဂုဏ်လို့ ယူဆမယ်ဆိုရင် ကိုပေါ လက်ခံမှာလား..။
အင်း . . . ကိုပေါက သာမာန်ထက် နည်းနည်းထူးခြားနေတာကိုး ( ပြိုင်ဘီးလေးနဲ့ဆိုလို့ပါ )း)
စာရေးရသော နောက်ကွယ် အကြောင်းရင်းကို လင်းပါ..။
>>>> ဇနိ….. ကာလ၀ိပါက် နောက်ပိုးတက် ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့….း-)
>>>> မခင်ဦးမေ….. ဆန်းဆန်းတွေး၍ ရိုးရိုးရေးပါ။
>>>> မျိုးမြင့်မောင်….. သံဝေဂ ရတာလား။
>>>> Craton….. ရယ်စရာတော့ တကယ်ကောင်းတယ်။
>>>> မောင်လမ်းသစ်….. ၀ိုင်းနမ်းကြတာတော့ ကောက်စိုက်မတွေ အဆိုးမဟုတ်လောက်ပါဘူး။ မောင်လမ်းသစ်ကိုယ်တိုင်က ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့နေမှာပါ။ ချစ်စရာကြီးတော်…ရွှတ်… ဆိုပြီးတော့လေ။
>>>> CMA…. အသစ်အဆန်းဆိုရင် အလွယ်တကူ လက်မခံချင်တဲ့ ဉာဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (ကျနော် ငယ်ငယ်က ဒီလောက် ချစ်စရာကောင်းတာကို….ဟွန့်)
>>>> Thant…. ထူးလည်းထူးတယ်။ ရူးလည်း ရူးတယ်။ မူးလည်း မူးတယ်…တို့ကိုကြီးကျော်…..။
>>>> Ko Boyz…. ဒီကောင်လေးနှယ်…နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မေးပဲ မေးနိုင်လွန်း..ကဲဟယ်…ဒေါက် (ထိပ်ခေါက်သံ)…….အံမလေး အမေရေ….နောက်မမေးတော့ပါဘူးဗျ…အီးဟီးဟီး (ဘွိုင်းဇ် ငိုသွားသံ…ဟီဟိ)
>>>> Anonymous….. စက်နဲ့ရိုက်ရတာကတော့ အမှန်ဘဲ။ အခု ဖောင်တိန်မကိုင်တာ ကြာပြီ။ ပေါဆို…စာပေါလောက ပေကိုးဗျ။ ခွိခွိ။
Maung Bamar said...
ကိုယ့်အလုပ်သာဆက်လုပ်၊ မြီးတစ်ကောင်နှင့် သားအဖနှစ်ယောက် တို့ မျက်မမြင်ပုဏ္ဏားများနဲ့ ဆင်တစ်ကောင် ဆိုတာတွေလဲ ကိုပေါသိမှာ သေချာပါတယ်။